श्रीमान श्रीमती को अन्तर कती हुनुपर्दछ? हेर्नुहोस् कहिल्यै पनि दु;खी हुनु पर्दैन… – Sanjal Nepal
Homeरोचकश्रीमान श्रीमती को अन्तर कती हुनुपर्दछ? हेर्नुहोस् कहिल्यै पनि दु;खी हुनु पर्दैन…
February 9, 2021 admin रोचक 3345
नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । सायद पि’तृ सतात्मक सोंच चि’न्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पु’रुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पु’रुषसँग गर्न चाहन्छन् । गरिरहेका हुन्छन् पनि ।
तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान् श्रीमती १ बर्षका जेठो कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ? किनभने विवाह एक यस्तो स’म्बन्ध हो, जसमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच खास तालमेल हुन जरुरी छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
November 1, 2020 admin रोचक 5815
November 23, 2020 admin रोचक 8728
अहिलेको आधुनिक विश्वमा पनि कैयौं प्रकारका परम्पराले स्थान पाएको देखिन्छ । केही पम्परा त सुन्दै अचम्म लाग्दा पनि हुन्छन् । आज यस्तै परम्पराबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित मणिकर्ण उपत्यकामा यस्तो पनि
February 10, 2021 admin रोचक 20072
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय सिनेमामा निकै चर्चित अभिनेत्री हुन् काजल अग्रवाल । उनी हालै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । एक महिना अघि विवाह गरेकी कागजले विवाह पछि आफुलाई भएको रोगवारे खुलासा गरेकी छन् । उनले
LEX 18 agenda conversation: Job club (445121)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418686)
Hello world! (346004)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318797)